Guud - Absolut Viajes | Safarka Absolut (Bogga 3)
Sannadka Cusub ee Shiinaha ee Sydney, waa xaflad saafi ah
Bishii Febraayo bulshada Shiinaha ee ku nool Sydney waxay u dabaaldegaan Sannadka Cusub ee Shiinaha oo ay la socdaan xaflad midab leh
Nadaafadda Masar hore
Nadaafadda Masar hore waxay ahayd mid aad muhiim u ah. Masaaridii hore waxay dhaqi jireen dhowr jeer maalintii, iyagoo isticmaalaya cadar ay ku jiraan astaamo dawo.
Soojiidashada dalxiiska ee ku xeeran Rome
Magaalada Rome kaligeed waxay ku siisaa meelo badan oo xiiso leh oo aad ku raaxeysan karto oo aad ku baran karto taariikhda, dhaqanka iyo dhaqammadii hore.
Booqo Catacombs-ka Rome - Saacadaha iyo qiimaha
Catacombs-ka Rome waa nooc ka mid ah qolalka dhulka hoostiisa ah oo hore loogu isticmaali jiray inay ku aasaan jaahilka, Yuhuudda iyo Masiixiyiinta
Xeebaha saaxiibtinimada leh ee Miami
Miami waxay leedahay xeebo xayawaan saaxiibtinimo leh oo leh beero lagu nasto oo ey ku raaxaystaan ​​biyaha.
Booqashada Qasriga Windsor ee England - qiimaha iyo jadwalka
Qalcadda Windsor ee ku taal England waa mid ka mid ah goobaha ugu muhiimsan dalxiis ee dalka waxaana runti loo tixgeliyaa qasriga ugu weyn uguna da'da weyn adduunka.
Muhaajiriinta Hooyadeed, oo ah taallo shucuur ah oo ku taal Gijón
Hooyada muhaajiriinta ah waa farshaxan ku yaal El Rinconín oo lagu sharfo hooyooyinka muhaajiriinta. Meel qiiro badan oo ay tahay in la booqdo.
The Domus Aurea ee Rome
The Domus Aurea ee Rome, sidoo kale loo yaqaan Guriga Dahabka ah, ayaa muddo dheer loo arkaa mid ka mid ah dhismooyinka ugu xad-dhaafka badan taariikhda Roman.
Xarumaha waaweyn ee laga dukaameysto ee Algarve, Portugal
Haddii aad booqato Boortaqiiska, gaar ahaan gobolka Algarve, hoosta waxaan rabnaa inaan ka hadalno xarumaha waaweyn ee wax iibsiga ee aad ka heli karto meeshan.
Kaniisadda 'Medici Chapel', oo ku taal Florence
In Florence, ee Basilica ee San Lorenzo, waxaad booqan kartaa Chapel of the Medici
Boortaqiiska, dadkiisa iyo afkiisa
Boortaqiiska waa wadan layaableh, leh xeelal qurux badan, goobo taariikhi ah, dhaqan iyo hiddo, waxyaalaha dalxiisayaasha dalkan yimaada sanad walba jecel. Muuqaal aad u muhiim ah ayaa ah dadkiisa iyo afkiisa.
Goorma ayey yihiin adeegyada diimeed ee Vienna Cathedral
Macluumaad ku saabsan waqtiyadii badnaa ee Cathedral ee San Esteban
Faa'iidooyinka iyo qasaaraha ku noolaanshaha Hong Kong
U guurista meel kasta oo adduunka ka mid ah had iyo jeer waxay leedahay faa'iidooyinkeeda iyo waxyeellooyinkeeda. Waxaan si sax ah ugaala hadli doonaa faa iidooyinka iyo qasaaraha ku noolaanshaha Hong Kong
Ruushka waxay bixiyaan ubaxyo aan caadi ahayn
Ruushku wuxuu leeyahay caadooyin aad u gaar ah. Markan waxaan u hibeyn doonnaa nafteena gaar ahaan mid, taas oo loola jeedo dhaqanka xiisaha leh ...
Ubaxa Lotus ee Masar Hore
Waxaan horey uga soo hadalnay ahmiyada ubaxyada ay leeyihiin jardiinooyinkii hore ee Masar. Ubaxa Lotus waa ...
Kaniisadda Domine Quo Vadis, oo ku taal jidka loo yaqaan 'Appian Way'
Kaniisadda Domine Quo Vadis waa kaniisad qadiimi ah oo ku taal jidka loo yaqaan 'Appian Way' halkaas oo la sheegay in Peter uu ku arkay Ciise
10 madxafyo bilaash ah oo ku yaal Milan
Qodobkaan waxaan kuugu soo bandhigeynaa 10 matxaf oo ku yaal Milan oo aad geli karto adigoon bixin wax lacag ah
Booqo Korantadii hore
Macluumaad lagu booqdo burburka Korantadii hore
Raac Jidka 52ka Tunnel
Wadada 52 Tunnels waa mid ka mid ah jidadka dalxiis ee ugu quruxda badan Talyaaniga
Qasriga Zuccari iyo wajiyadeeda xun
Qasriga Zuccari waa dhisme qadiimi ah oo lagu qurxiyay wejiyo xun oo ku yaal waddooyinka Rome
Wareegga Dhagaxa Drombeg
Drombeg Stone Circle waa mid ka mid ah goobaha megalithic-ka ugu caansan ee Cork iyo Ireland
Macbadka Caafimaadka Minerva
Macbadka Minerva Médica, oo ku yaal xaafadda Esquilino, waa dhisme laga soo bilaabo qarnigii XNUMXaad oo, si xiise leh, uusan u ahayn macbud sidan oo kale
Damaashaadka xiisaha leh ee Maska, ee Cocullo
Magaalada Cocullo, gobolka Abruzzo, xafladda xiisaha leh ee Masaska ayaa sanad walba ka dhacda, iid aabbo ah
Qaar ka mid ah farshaxanno ku habboon Gijón
Waxaan ka hadleynaa seddex sawir gacmeedyo ka socda magaalada Gijón: Elogio del Horizonte, Monument to Solidarity iyo Sombrs de luz.
Santeria, nuxurka Kariibiyaanka
Santeria waa dhaqan diimeed aad ugu baahsan Kariibiyaanka, oo ah mid ka mid ah astaamaha lagu garto aaggan adduunka.
Wadaadka Saint Aquilino ee Kaniisadda San Lorenzo Maggiore
Gudaha Kaniisada San Lorenzo Maggiore waxaa ku yaal kaniisada San Aquilino iyo mosaics-keeda laga soo bilaabo qarnigii XNUMXaad.
Taallada Filarete ee ku taal Sforzesco Castle
Torre del Filarete waa munaaradda ugu dheer uguna weyn ee Sforzesco Castle
Hospice-ka San Michele
Waxaa la dhisay qarnigii XNUMXaad, Hospice-ka San Michele wuxuu u adeegay taariikhdiisa oo dhan magangelyo, xabsi iyo agoon
Julia Tuttle, haweeneyda dhashay Miami
Magaalada Miami waxay ku dhalatay mahadhada haweeney aragti dheer iyo balanqaad ay sameysay. Julia Tuttle waa hooyada Miami.
Habeenkii San Juan ee Badalona
23-ka Juun, Badalona waxay u dabaaldegtaa habeenka San Juan xeebta: dabka, biyaha, muusikada, hilib-dubka iyo dad badan si ay ugu raaxaystaan ​​habeen sixir ah.
Tamiya Plamodel Factory, dukaan qaab riyo dhab ah
Warshadda Tamiya Plamodel waa dukaan ku yaal degmada Tokyo ee Shinbashi halkaas oo aan ka heli doonno kumanaan xirmooyinka moodeelka ah.
Wareegyada wareega wareega, calaamadda Caribbean ee flamenco
Muusikada Kariibiyaanka iyo Laatiin Ameerika waxay saameyn ku yeesheen muusigga flamenco. Waxaan dib u eegeynaa guajira, rumba iyo reer Colombia.
Milan iyo Napoleon Bonaparte
Maqaalkan waxaan ku qaadaneynaa waddo gaaban oo loo maro taallooyinka laga dhisay magaalada Milano xilligii Napoleon Bonaparte.
Qaar ka mid ah waxyaabaha laga mamnuuco Shiinaha
Denmark waa wadanka aduunka ugu farxada badan, waayo?
Denmark waa wadanka ugu farxada badan sida lagu sheegay daraasad ay sameysay UN-ka. Maxaa ka dhigaya waddankan woqooyiga yurub ah kan ugu sarreeya qiimeynta?
Sari iyo dhoti, oo ah labbiska dharka caadiga ah ee Hindiya
Sari iyo dhoti waa laba ka mid ah dharka ay aadka u isticmaalaan dumarka iyo raggu wadankan
Ka soo qaado baasaboorka reer Croatia dibedda
Qoraalkan waxaan ku sharaxeynaa nidaamka aad ugu baahan tahay inaad ku hesho baasaboorkaaga Croatia haddii aad ku nooshahay dibadda.
Xafladaha dhaqanka ee ugu wanaagsan Australia
Dhacdooyinka dhaqanka ugu wanaagsan iyo ciidaha Australia, magaalo magaalo
Dhaqdhaqaaqa xiisaha leh ee Australia
Waxaa jira dhaqdhaqaaqyo la sameeyo iyada oo aan ujeeddo xumo la doonaynin wakhti kasta, in kasta oo ay jiraan meelo kuwa noo muuqda in ay caadi noo yihiin ay qallafsan yihiin.
Waxaa ka mid ah ciidaha badan ee sanadka oo dhan ka dhaca England, Bandhigga Farmaajada Rolling ayaa taagan.
Mid ka mid ah gaadiidka ugu caansan Nederland waa baaskiil, in kastoo tareenka iyo baskuba ay caan yihiin.
Samee ukun u gaar ah Giriigga Easterka
Ukunta guduudan, dhaqankii Easter-ka ee Griiga
Kaniisada Santa María presso San Satiro
Kaniisada Santa Maria presso San Satiro, laga soo bilaabo dabayaaqadii qarnigii XNUMXaad, waa mid ka mid ah kuwa ugu xiisaha badan bartamaha magaalada Milano
Tiirka Birta ah ee dahsoon ee Delhi
Tiirka Birta ee Delhi waa taallo ku taal Qutb Complex, oo ku taal bartamaha Masaajidka Quwwatul ee magaalada New Delhi
10ka magaalo ee ugufiican ee lagu noolaado Nederland
Sannad kasta majaladda Elsevier waxay sameysaa liistada 50ka meelood ee ugu wanaagsan ee lagu noolaado Holland iyadoo lagu saleynayo ...
Doomaha Nile: Qaahira ilaa Luxor
Waxaa jira waddo caan ah oo loo maro wabiga Niil.Waxay ka bilaabmaysaa Qaahira ilaa Luxor oo ku soo noqotay ...
Holland dagaalkii labaad ee aduunka: Buundada Arnhem
Buundada Arnhem waxay noqotay astaan ​​aan dhamaanayn oo geesinimada askarta hawada ku jirta waxayna ahayd was
Socod ku maray Madxafka Gawaarida ee Miami
Gawaarida caadiga ah waxay saf saf ugu jiraan xarun shidaal oo maran wadada dheer ee waqooyiga ...
Matxafka dharka ee Morando Palace
Qasriga Morando, oo la dhisay qarnigii toddoba iyo tobnaad, waxaa ku yaal carwo farshaxan iyo Matxafka Dharka
Meelaha Wabiga Ganges
Maanta waxaan ogaan doonaa qaar ka mid ah wabiyada ugu muhiimsan ee Wabiga Ganges. Aynu ku bilowno sheegidda Wabiga Alaknanda, oo ah webi ku yaal Himalayas ...
Julia Curia oo ka tirsan shirkii Roman
Curia Julia waa mid ka mid ah astaamaha ugu wanaagsan ee lagu keydiyey shirkii Roman. Waxay ahayd dhismihii ay ku kulmeen mudanayaashu xilligii jamhuuriyadda
Xabsiga San Vittore
Xabsiga San Vittore oo la furay sanadkii 1879-kii ayaa ka mid ah xabsiyada ugu waaweyn dalka Talyaaniga
Dhinacyada taban ee Nidaamka Waxbarashada ee Hindiya
Maanta waxaan dhihi doonaa sababta nidaamka waxbarasho ee Hindiya uusan ugu fiicnayn. Qodobka koowaad ee ...
Xarumaha quusin ee ugu wanaagsan Miami
Miami waxaa laga aqoonsan yahay adduunka oo dhan inay tahay Caasimadda Caalamiga ah ee Quusitaanka tan iyo markii ay leedahay meelo badan ...
Wadooyinka socodka ee Iswiidhan
Kungsleden (»King's Way») waa marin tamashle oo lagu maro woqooyiga Sweden, oo ku saabsan ...
Sida makhaayad looga furo magaalada Miami
Si loo bilaabo ganacsi makhaayad guuleysata waa inaad diyaar u noqotaa inaad saacado badan qorshayso. Nidaamka ayaa ...
Xafladda Carnival ee ka dhacda dalka Portugal waa waqti xiiso iyo xamaasad leh oo bilaabmaya bisha Febraayo. Waa xaflad…
Niil, oasis lamadegaanka
Mid ka mid ah dooxooyinka ugu quruxda badan adduunka waa webiga Niilka ee sharafta leh, oo qaybtiisu ...
Xeebaha Masar ugu jecel yihiin
Dalal badan oo ku yaal Waqooyiga Afrika waxay ku raaxaystaan ​​meel ay ka hinaasaan karaan badda. Dadka soo booqda qaarkood waxay aadaan Morocco, ...
Qalabka ay adeegsadaan Haweenka Hindida ah
Maanta waxaan la kulmaynaa qalabka ugu badan ee dumarka Hindida ah. Aynu bilowno inaan xusno ...
Maxay yihiin sababaha caanka ah ee dhimashada Hindiya?
In kasta oo ay run tahay in 5ta sababood ee ugu sarreeya ee dhimashada Hindiya ay yihiin wadno xanuun wadnaha ah, ...
Sababaha keena dhimashada Hindiya
Munaasabaddan waxaan kuugu soo bandhigi doonnaa darajooyinka sababaha ugu waaweyn ee dhimashada Hindiya: Cudurada Wadnaha oo sidoo kale loo yaqaan ...
Farqiga u dhexeeya Hindiya iyo Reer Galbeedka
Markan waxaan ku tusi doonaa xoogaa farqi ah oo u dhexeeya Hindiya iyo dhaqanka reer galbeedka. Aan ku bilowno ka hadalka furitaanka. Qiime…
Rinjiyeyaasha aadka u wanaagsan ee Hindiya
Munaasabaddan waxaan ku ogaan doonnaa kuwa ugu caansan rinjiyeyaasha Hindiya. Aynu ku bilowno sheegista Abanindranath Tagore, oo loo tixgeliyo ...
Miami, magaalada xeebaheeda quruxda badan, makhaayado heer sare ah, hudheelo qaali ah, laba naadi oo firfircoon iyo goob caan ah, ...
Meelaha ugu quruxda badan ee lagu booqdo Holland
Waqtiyadii hore, Nederland waxay ahayd quwad weyn oo dhanka bada ah hadana waa mid kamid ah wadamada ugu dadka badan ...
Sala delle Asse oo ku taal Qasriga Sforzesco
Gudaha Qalcadda Sforzesco waxaa ku yaal Sala delle Asse, oo ku taal mid ka mid ah sawirrada ugu xiisaha badan ee Leonardo da Vinci
Kaamamka ugu Fiican Florida: Fort De Soto Park
Kaamamka ku wareegsan quruxda dabiiciga ahi waa hawl ku habboon qoyska oo dhan. Haddii ay tahay gobolka Florida, ...
Baaskiil ku dhex socodka Seeraha Dabiiciga ah ee Serra da Arrábida
Seeraha Dabiiciga ah ee Serra da Arrábida, oo ku yaal koonfurta magaalada Lisbon, ayaa hoy u ah dhowr ...
Hadiyadaha ugu jilicsan ee laga iibsado Iswiidhan
Ma ka fikireysaa booqasho Sweden? Mise waa inaad ku nooshahay Iswiidhan oo aad u baahan tahay wax aad guriga u dirto ...
Isbitaalada waaweyn ee Hindiya
Markan waxaan ogaan doonnaa isbitaalada waaweyn ee Hindiya. Aynu bilowno inaan xusno kiiska Sir Ganga Ram ...
Xaqiiqooyin xiiso leh oo ku saabsan Sweden
Dalka Iswiidan oo ka mid ah meelaha ugu quruxda badan ee loo safro Yurub, waxay soo bandhigtaa goobo dalxiis oo fara badan isla mar ahaantaana sheeko ...
DJ-yada ugu Fiican Australia
Markan waxaan la kulmi doonnaa DJ-yada ugu muhiimsan Australia. Aynu ku bilowno tixraaca George Kordas, oo loo yaqaan ...
Markan waxaan la kulmi doonaa kooxaha waaweyn ee dhagaxa weyn ee Australia. Aynu bilowno adoo sheegaya Jet, koox dhagax ah oo ka socota ...
Sababaha loogu safro Boortaqiiska xilliga qaboobaha
Boortaqiiska wali waa mid ka mid ah wadamada ugu raqiisan Yurub ee la booqdo, gaar ahaan xilliga hoose, oo ...
The Unicredit Tower, waa dhismaha ugu dheer Talyaaniga
Tower-ka loo yaqaan 'Unicredit Tower', oo dhererkiisu yahay 231 mitir, ayaa hadda ah dhismaha ugu dheer dalka Talyaaniga waana xarunta uu hadda ku fadhiyo bangiga Talyaaniga ee Unicredit
Dukaamada dharka dabbaasha ee ugu wanaagsan Miami
Miami waxaa lagu yaqaanaa quruxda South Beach, qorraxda iyo ciidda, marka dabcan…
La Porta Pía, shaqadii ugu dambeysay ee Michelangelo
Maanta waxaan booqannay Porta Pía, irridda derbiyadii hore ee Aurelian, shaqadii ugu dambeysay ee naqshad dhismeed ee Michelangelo ay qabatay iyadoo weli nool.
Iswiidhan, dhaqanka iyo dabeecadda
Iswiidhan waxay ka mid tahay wadamada Scandinavian-ka oo leh dalab dhaqameed oo aad u wanaagsan, iyo waliba banaanka si ay isu fahmaan ...
Taariikhda calanka Masar
Masar waxay u badan tahay inay tahay ilbaxnimada ugu da'da weyn adduunka ee ka tagtay Dooxada Niil, qiyaastii 3100 ...
Waa kuwee Hindida Ugu Fiican?
Markan waxaan raadineynaa kuwa ugu quruxda badan Hindida. Shaki la'aan waa inaan kubilaabnaa xusida Salman Khan, ...
Sida loo tago Abu-Simbel
Ahaanshaha mid ka mid ah meelaha loo dalxiis tago ee ugu fog dalka Masar, dhowr kiiloomitirna u jirta xadka ay la wadaagaan Suudaan, Abu-…
Taariikhda Hindidii hore: Dadyowgii Hore, Aryans iyo Brahmanism
Hindiya waa jasiirad ballaaran oo ku taal Aasiya, waa gobol ballaadhan oo tan iyo waqtiyadii hore ay ka jirtay ilbaxnimo qurux badan….
Maraakiibtii hore ee Boortaqiiska
Maraakiibta qadiimiga ah badanaa waxay soo gudbiyaan dareenka hilaac iyo jacayl ilaa maanta. Waxay na xusuusinayaan in muddo ah ...
Waxa la sameeyo garoonka diyaaradaha Denver ee istaagga ah
Gegada Diyaaradaha Caalamiga ah ee Denver waxay ku taal meel qiyaastii 25 km u jirta bartamaha caasimadda Gobolka Colorado,…
Waxyaabaha lagu sameeyo garoonka diyaaradaha Schiphol inta lagu guda jiro istaagida
Gegada diyaaradaha Schiphol waxay ku taal meel qiyaastii 5,6 mayl u jirta bartamaha Amsterdam, taasoo ka dhigaysa magaalada meel loo socdo…
Dinosaurs-ka Madxafka Carruurta ee Miami
Matxafka Caruurta ee Miami wuxuu ku yaalaa Jasiiradda Watson, oo u dhexeysa magaalada Miami iyo…
Taallada Taariikheed ee Hindiya
Maanta waxaan booqan doonnaa taalooyinka taariikhiga ah ee ugu muhiimsan Hindiya. Aynu ku bilowno tilmaamida kiiska Taj ...
Bandhigyo caan ah oo ka socda Chaves
In Chaves, oo ah magaalo ku taal degmada Vila Real, Gobolka Waqooyiga iyo Alto Trás-os-Montes subregion, waa la fuliyaa ...
Waxqabadyada 5-ta ugu sarreysa ee lala yeesho carruurta ku nool Galway
Shan hawlood iyo goobo loogu talagalay daawashada carruurta Galway
Xilli ciyaareedkii ugu fiicnaa ee lagu dul fuulo Boortaqiiska
Iyada oo leh 450 kiiloomitir xeebta Atlantik, taxane ah xeebo aan fiicnayn oo aan fiicnayn iyo hirarka ugu fiican ...
Meelaha ugu nugul ee Miami
Ka fekerida "Miami" waxay isku koobaysaa sawirrada xeebaha quruxda badan, meydadka maqaarka leh ee qorraxdu kulushahay, iyo naadiyada ...
Meelaha sarraysa iyo kuwa dahsoon ee Portugal
Haddii mid ka mid ah uu ku dhex safrayo dalka Portugal oo loogu talagalay xafladaha Halloween, oo loo dabaaldego Oktoobar 31, iyada oo ...
Saacadaha qabuuraha Badalona ee Maalinta Awliyo oo dhan
Saacadaha furitaanka qabuuraha Maalinta All Saints Day.
Suuqyada wadada ee Milan
Maanta waxaan ognahay qaar ka mid ah suuqyada waaweyn ee jidadka ee toddobaad kasta lagu qabto waddooyinka iyo fagaarayaasha magaalada Milano
Miami, oo ah marinka laga galo badda Caribbean-ka
Miami waxay ku taal xeebta Badweynta Atlantik, oo qiyaastii 70 km u jirta xeebta jasiiradda ...
Xeebaha Miami ee Carruurta ugu Fiican
Safar la’aan South Florida ma noqon doonto mid dhameystiran maalin la’aan xeebta. Dareenkan, haddii aan ogahay ...
Baro Xarunta Dhexe ee Stockholm
Saldhigga Dhexe ee Stockholm (Stockholms Centralstation) waa xarunta tareenka ee ugu weyn Iswiidhan oo ku taal ...
Muraayadda Iswidishka, hibada iyo farsamada gacanta
Boqortooyada Cristal ama Glasriket waa gobolka koonfureed ee Iswiidhan halkaas oo lagu sameeyo muraayadaha caanka ah ...
Hogaamiyeyaasha Taariikhda ee Hindiya
Maanta waxaan la kulmi doonnaa hoggaamiyeyaasha taariikhda ugu weyn ee Hindiya, kuwaas oo caan ku ah oo aan ku qanacsaneyn oo keliya ...
Maxay yihiin goobaha wax iibsiga tooska ah ee ugu fiican Hindiya?
Markan waxaan ogaan doonnaa kuwa ugu fiican goobaha wax lagu iibsado ee internetka ee Hindiya. Aynu ku bilowno sheegista ...
Wax soo saarka ugu badan ee Hindiya loo dhoofiyo
Maanta waxaan ogaan doonnaa kuwa ugu dhoofinta badan wax soo saarka aasaasiga ah ee Hindiya. Aynu ku bilowno sheegidda shidaalka macdanta, ...
Meelo lagu booqdo London
London, caasimada England waa meel ay ku riyoodaan booqdayaal badan. Iyada oo leh meelo xiiso leh oo laga ogaado ...
Farshaxanada Ustaraaliya ee 80-yadii
Maanta waxaan ogaan doonnaa kuwa ugu fiican fanaaniinta Australiyaanka ee 80-maadkii. Aynu ku bilowno sheegista ...
Baro Madxafka Tattoo-ka Amsterdam
Mid ka mid ah matxafyada cusub ee qalaad ee soo jiidashada leh ee ku yaal Amsterdam waa Matxafka Tattoo Amsterdam kaas oo ku yaal laba ...
Bandhigyada TV-yada ugu caansan Hindiya
Markan waxaan ku soo bandhigi doonnaa barnaamijyada telefishanka ugu caansan iyo taxanaha telefishanka Hindiya. Aynu ku bilowno sheegista ...
Filimada Bollywoodka ee lacagaha ugu badan soo xareeya
Bollywood waa mid kamid ah warshadaha ugu awooda badan shineemooyinka. Sannad kasta boqolaal soosaarid filim ah ayaa laga sameeyaa ...
Maxay yihiin mootooyinka iibinta ugu fiican Hindiya?
Waxaa la ogyahay in mid ka mid ah gaadiidka ugu caansan Hindiya ay tahay mootooyin, waana sababta…
Magaalooyinka ugu wasakhda badan Hindiya
Waxaan si fiican u ognahay in Hindiya ay tahay qaran leh heerar wasakh badan oo wasakheyn ah, hawo iyo biyo labadaba.
Wadada biirka ee Amsterdam
Taageerayaasha Beer waxay ku raaxeysan doonaan tacabur iyaga oo u maraya warshadaha wax soo saarka Amsterdam ee taariikhiga ah. Waana taas ...
Wasakhda adduunka waxaa sabab u ah sababo taxane ah sida xaalufinta Amazon, soo saarista ...
Toddoba Mile Bridge, oo ah yaab injineernimada ku taal Florida
Toddobada Mile Bridge waa qaab dhismeed astaan ​​u ah Fureyaasha Florida ee ...
Magaalooyinka ay doorbidaan dalxiisayaasha England
England waa mid kamid ah wadamada ugu booqashada badan aduunka. Sannad kasta qiyaastii 30 milyan oo dalxiisayaal ajnabi ah ayaa yimaada ...
Kaniisadaha waaweyn ee Manizales
Socdaal kaniisadaha ugu quruxda badan magaalada Manizales, muunad ka mid ah naqshadaha hodanka ah ee caasimada Caldense
U kac xagga Terraces of the Duomo ee magaalada Milano
Mid ka mid ah booqashooyinka lagama maarmaanka ah ee ay tahay inaad ku sameyso Milan waa inaad u kacdo Terrazas del Duomo oo aad ka fikirto aragtida
Baro Castillo Unanue de Cañete
Cañete, magaalo 140 km koonfur ka xigta Lima, booqdehu wuxuu booqan karaa Hacienda Arona, oo sidoo kale loo yaqaan…
Ku raaxayso ugaarsiga Morocco
Morocco waa meel fiican oo loo ugaadhsado.
Macnaha gaadiidka si loogu wareego Norwey
Qaabab gaadiid oo aan ka helno Noorway.
Khariidadaha gaadiidka Dublin, si aad u soo dejiso
Ka soo dejiso khariidadaha dalxiiska degelka dalxiiska ee Dublin
Beer Jabbaan ah oo ku taal Irland
Tully, waa jardiinka Japan ee Ireland
Vlissingen, oo ah deked leh taariikh
Vlissingen waa magaalo ku taal koonfur-galbeed jasiiraddii hore ee Walcheren. Iyada oo ku taal meesha istiraatiijiga ah ee u dhexeysa ...
Meelaha laga iibsado ama laga kireeyo dharka Miami
Xisbiyada mowduucu kuma koobna oo keliya magaalada Miami, laakiin sidoo kale waxay ka mid yihiin kuwa loogu jecel yahay ...
Casablanca iyo Rabat, kee baa qurux badan?
Waddan sida Marooko oo kale ah oo leh afar Magaalo Imperial, way adag tahay in hal magaalo la doorto oo la yiraahdo ...
Libaaxyada naxaas ee HSBC
Arch of Triumph ee magaalada Moscow
Bishii Meey 9keedii, 1945, Dagaalkii Labaad ee Adduunka ayaa dhammaaday tan iyo markaasna, sanad walba, ...
Jilayaasha Caanka ah ee India iyo Jilayaasha Hollywood
Shaki kuma jiro in Bollywood ay dareensiisay jiritaankeeda adduunka oo dhan. Aktaro badan iyo jilaayaal ...
Maxay yihiin filimada ugu caansan Bollywood-ka?
Markan waxaan la kulmi doonnaa filimada ugu caansan Bollywoodka. Aynu ku bilowno sheegista Disco Dancer, a ...
Taxanaha B Filimada
Bollywoodka waxaa caan ku ah sameynta guulo ganacsi oo weyn, hase yeeshe waxaan sidoo kale helnaa filim taxane ah B. Aynu ogaanno waxa the
Agaasimayaal Muhiim ah Filim Hindi ah
Markan waxaan kuu soo bandhigi doonaa qaar ka mid ah agaasimayaasha ugu muhiimsan shineemooyinka Hindida. Aynu ku bilowno sheegista Guru ...
Daawashada nibiriga ee Noorway xagaaga
Dalxiisyada lagu arko nibiriyadaha iyo xayawaannada kale ee ku nool Norway.
Jewels ee Masar hore
Waqtiyadii hore, Masar waxay ka mid ahayd wadamada ugu qanisan Dunida. Waxa intaa dheer in taallooyin waaweyn iyo ...
Loftus Hall, oo ah mid ka mid ah guryaha ay dagan yihiin Ireland
Loftus Hall, guriga ay degan yihiin Ireland
Waqtiga ugufiican ee loo safro Holland
Xilliga dalxiiska ee Holland wuxuu gaarayaa heerkiisii ​​ugu sarreeyay inta u dhexeysa Abriil iyo Oktoobar. Beeraha tulip-ka ee ...
Bunad, dharka hidaha iyo dhaqanka noorwiijiga
Marka ay timaado u safridda dhulal cusub, ogaanshaha dhaqankooda iyo dhaqankoodu waa qeyb aasaasi u ah dalxiis kasta oo dalxiis;
Ukunta cas, hadiyadda bisha ugu horreysa nolosha
Shiineysku waxay bixiyaan ukunta casaanka ilmaha dhalashadiisa bisha ugu horreysa noloshiisa
Shuruudaha lagu guursado England
Inaad ku guursatid London waxay aad ugu egtahay inaad ku guursato Mareykanka. Lammaanaha waxay yeelan karaan xaflad madani ah ama ...
Easter waa mid ka mid ah ciidaha Masiixiyiinta ugu muhiimsan ee adduunka oo dhan looga xuso xamaasad weyn ...
Japan waxay ka heshay "dhul dhif ah" baddeeda
Japan ayaa heshay "dhul dhif ah" oo ay dhigato baddeeda oo qoto dheer 5.800 mitir.
Dhaqannada qalaad iyo Caadooyinka Hindiya
Markan waxaan baran doonnaa dhaqamo aad u yaab badan iyo caadooyinka Hindiya. Aynu bilowno inaan xusno Gubashada Carmallada ...
Qadiimiga ah iyo Caadooyinka qariibka ah ee Hindiya
Hindiya waa meel ka soo horjeedda, waa waddan leh dhaqaale casri ah oo kobcaya, isla mar ahaantaana ...
Dukaammada qaxwada ee ugu da'da weyn Amsterdam
Caasimadda Dutch-ka waxay bixisaa qaar ka mid ah maqaayadaha "ugu da'da weyn" ee, mar gudaha la galiyo, soo rari doona booqdaha dhowr ah ...
Baararka halka marijuana lagu cabo Amsterdam
Waxaa jira baarar cayiman oo ku yaal Amsterdam halkaasoo loo oggol yahay in lagu nuugo marijuana, laakiin ma aha Dukaamada Qaxwada. Mid baa cabi kara ...
Maxay yihiin kooxaha muusikada ugu fiican Australia?
Markan waxaan la kulmi doonnaa kooxaha muusikada Australia ugu fiican. Aynu bilowno adoo sheegaya Russell Crowe iyo ...
Dharka Masar Hore
Cimilada Masar oo kulaylaha kulul iyo qaboobaha fudud ayaa doorbiday adeegsiga dharka fudud ee ka samaysan fiilooyinka ...
Waa kuwee DJ-yada ugu fiican Hindiya?
DJ ama Disc Jockey waa qof sameeya muusig la duubay oo loogu talagalay dhagaystayaasha, naadiga, baararka, discos iyo ...
De Bazaar, waa suuqa ugu weyn gudaha ee Holland
De Bazaar waa saqafka ugu weyn ee dusha sare laga daboolo ee ku yaal Yurub kuna yaal Beverwijk, oo ah magaalo ...
Waa kuwee fanaaniinta ugu fiican Hindiya?
Markan waxaan la kulmi doonnaa fannaaniinta ugu fiican Hindiya. Aynu ku bilowno xusidda Mohammad Rafi, oo loo tixgeliyo heesaa ...
Waa maxay waxyaabaha laga iibsado Hindiya?
Hindiya waa janno adeegasho. Halkan waxaad ka heli kartaa maqaallo kala duwan, oo inta badan gacmo lagu sameeyo, ...
Hoteelada aad ku mari karto marijuana Amsterdam
Amsterdam, oo caan ku ah meelaheeda tijaabinta ah sida Degmada Red Light iyo Dukaamadeeda Qaxwaha, waa soo jiidasho the
Holland iyo qalcadihii dhexe
Taallo taariikhi ah oo taariikhi ah ayaa taagan meel kasta, inta badanna wali waa maalin walba la isticmaalo, sida qarniyo ka hor. Daar…
Maxaad u baahan tahay inaad ogaato ka hor intaadan u safrin Sweden
Iswiidhan waxay xuduudeeda la wadaagtaa Finland, Norway iyo Badda Baltic. Iswidishku waa luuqada rasmiga ah ee Iswiidhan waana xubin…
Barafka barafka ee Stockholm
Xilliga jiilaalka ee Iswiidhan waa mid gaar ah. Inbadan waxay u tahay waqtiga aad ugu raaxeysan karto si weyn ...
Aad u badan, magaalada aan waligeed seexan
Magaalo dhaqameed Masaari ah oo la booqdo waa Tanta, oo ku taal Hoose Masar, caasimada gobolka ...
Magaalooyinka iswiidhishka ee u dhow wareegga Arctic
Gallivare waa magaalo ku taal Lapland ee Sweden waxayna ku taal gobolka Norrbotten. Waxay ku taal ...
Masar qiyaastii 15% dadku waa Masiixiyiin. Iyagu waa qaybta kaliya ee bulshada ee runtii u dabbaaldegta ...
Meelo lagu booqdo koonfurta Mareykanka
Ma waxaad raadineysaa liistada meelaha aad booqanaysid ee ku taal koonfurta gobolka Mareykanka? Tani waa liiska soojiidashada ...
Hindida Dhaladka ah ee caanka ah Mareykanka
Hindida Mareykanka Asalka ah waa qeyb muhiim ka ah taariikhda iyo dhaqanka Waqooyiga Ameerika. Iyadoo loo marayo…
Xaqiijiyay: Gypsies waxay ka yimaadeen Hindiya
Saynisyahannadan, iyagoo adeegsanaya falanqaynta DNA-da ee 13 ka mid ah dadka Roma ee ku nool Yurub, waxay awood u yeesheen inay xaqiijiyaan asalka Hindida ee Roma
Naadiyada & Baararka ugu Fiican Miami
Bar Bar wuxuu furan yahay ilaa 5-ta subaxnimo, Boy Bar wuxuu sumcad wanaagsan ku dhex leeyahay bulshada khaniisiinta Koonfurta Florida. Waxaa jira…
Latina, oo ah magaalada casriga ah ee talyaaniga
Latina, magaalo casri ah oo uu aasaasay Mussolini
The Propylaea, oo laga soo galo Acropolis of Athens
Balanbaalis World; Dunida Balanbaalis ee Fort Lauderdale
Haddii aad carruur ula safreyso Fort Lauderdale, oo ah magaalo ku taal 3o km waqooyiga Miami, waa inaad…
Biirka ugu caansan Hindiya
Warshadaha biirka Hindida ayaa kor u kacaya, booqashada India ma dhameystirmi laheyd iyadoo aan la isku deyin ...
Xannaanooyinka caanka ah ee London
Mid ka mid ah meelaha aad naftaada dhex gasho oo aad ku nasato magaalada firfircoon ee London, waa Clifton Nurseries,…
Cabitaanada iswiidhishka dhaqameed
Iswidhan, waqooyiga Yurub, waxaa laga yaabaa inay caan ku tahay taariikhdeeda Viking. Maanta waa ...
Kulliyadda 'Colleoni Chapel', soo jiidashada Bergamo
Colleoni Chapel, soo jiidashada Bergamo
Quruxda kaniisada Salerno Cathedral
Dalxiis Dalxiis oo Scottish ah
Highlands (Highlands ama Scottish Highlands), waa gobol buuraley ah oo leh baaxad dhan 25.784 km² woqooyi ...
Jasiiradaha waaweyn ee Marooko
Qodobka aan ku ognahay jasiiradaha waaweyn ee Marooko.
Xiisaha dunida Islaamka
Qodobka aan ku ogaanayno qaar ka mid ah xiisaha dunida Islaamka.
Ku soo wareegaya xaafadaha Venedik
The sestiere, xaafadaha, ee Venice
Sharciyo cusub oo loogu talagalay ajaanibta ku sugan Boortaqiiska
Sharciyada cusub ee nidaaminaya soo gelitaanka, joogitaanka iyo ka bixitaanka ajaanibta, waxaa la soo bandhigi doonaa bisha Oktoobar. Xeerka cusub ayaa sidoo kale dabooli doona ...
Meelo lagu dego Boortaqiiska
Boortaqiiska waa wadan yar oo xoog ku qabsada qaybta koonfur-galbeed ee Jasiiradda Iberian, oo xuduud la leh Spain ...
Macluumaad ku saabsan Parthenon
Parthenon ee Athens
Lombardy, waa gobolka ugu quruxda badan uguna qanisan Talyaaniga
Lombardy, oo ku taal Talyaaniga
Fasaxyada Qaranka ee England: Maalinta Dagaal
La xuso bisha Sebtember 15, Dagaalkii Maalinta Ingiriiska, waa ciid qaran oo lagu xuso sannadguuradii ...